Tirada dhimashada ee ka dhashay qarax ka dhacay Peshawar oo sii kordhaya. – SBC
Tirada dhimashada ee ka dhashay qarax ka dhacay Peshawar oo sii kordhaya.
Posted by editor on June 12, 2011 Comments
Waxaa sii kordhaya Tirada dadkii ku nafwaayay qaraxyo isxigxiga oo ka dhacay goob suuq ah oo ku taala Magaalada Beshawar ee Waqooyi galbeed dalka Pakistan.
In ka badan 34 qof ayaa inta haatan la ogyahay ku nafwaayay qaraxyadaasi,iyadoona 90 kale ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen Saraakiil ka tirsan Ciidamada booliska Pakistan ee ku sugan deegaankaasi.
Qaraxyada ayaa kusoo aaday wakhti habeenimo ah,waxaana goobta ay ka dheceen ay ahayd, deegaan hoy u ah Siyaasiyiin iyo weliba saraakiil boolis oo ka tirsan Dowlada Pakistan.
Tirada weerarada ay qaadayaan Kooxaha kasoo horjeeda Dowlada Pakistan,gaar ahaana ka tirsan Daalibaanka dalkaasi ayaa kordhay tan iyo wixii ka dambeeyay dilkii hogaamiyihii Al qacida Sheikh Usama Bin ladin.
Maalintii khamiista ayay ahayd markii ay Afar qof ku dhinteen Qarax ka dhacay Peshawar,waxaana sidoo kale Isbuucyadii aynu soo dhaafnay isla gudaha dalkaasi ka dhacay qaraxyo lamid ah kuwaasi,iyadoona ay galaafteen nolosha dad badan oo rayid ah.
Qaraxyadan ayaa kusoo aadaya xili Pakistan uu booqasho ku tagay madaxweynaha Afganistan,iyadoona waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxda dalalkaasi ay kamid ahayd sidii ay u kordhin lahaayeen la dagaalanka Al qacida iyo weliba Daalibaanka labada Dal.